कोरोना भाइरसलाई हरा उनु छ भने साइकल चलाएर अफिस जानुहोस् !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /International News/कोरोना भाइरसलाई हरा उनु छ भने साइकल चलाएर अफिस जानुहोस् !!
बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसोनले तौल बढी भएका आफ्ना नागरिकले नोभेल कोरोनाभाइरसको संक्रमणलाई हराउनका लागि आफ्नो प्रतिरोधी क्षमता विकसित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
यस हप्ता, विशेषज्ञले तौल बढी भएका मानिसहरु कोभिड–१९ संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको र संक्रमण रहेको खण्डमा उनीहरुमा मृत्युदर पनि बढि हुने बताएका छन् । तौल कम गर्नका लागि जोनसोनले आफ्ना नागरिकलाई साइकल चलाएर अफिस जान आग्र ह गर्नेछन् ।
जोनसोनले जारी गर्ने यस्तो सुझाव नयाँ सरकारको रणनीति अनुसार हो जसमार्फत् भाइरसको संक्र मणको प्रभाव कम गर्न प्रयास जारी छ । यसमार्फत्, बालबालिकाका लागि जंक फुडको विज्ञापनमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने रेष्टुरेन्टको मेन्यूमा क्यालोरीको मात्रा पनि लेख्न आदेश दिइएको छ ।
‘सक्रिय यात्रा’ -हिँड्नु, साइकल चलाउनु जस्ता क्रियाकलापले तौल घटाउन सहयोग गर्ने विभिन्न अनुसन्धानले पुष्टि गरेका छन् । सात युरोपेली शहरमा अध्ययन गरिएको एक शोधमा दैनिक रुपमा साइकल चलाउँदा बडी मास इन्डेक्स सबैभन्दा कम स्तरमा हुने बताइएको छ ।